မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 50 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Assistant Auditor (1) Post
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 400,000 - 600,000
Cashier Female (2) Posts
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 600,000 - 800,000
လွန်ခဲ့သော 15 နာရီ က
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 1,000,000 - 1,500,000
လွန်ခဲ့သော 17 နာရီ က
Join with Pioneer Special Poly Bag Industrial Co.,Ltd
Job Summary We are urgently looking for Assistant Account who is esteemed to work with our Organization.
Microsoft office suite ( Advanced Excel ) ကျွမ်းကျင်ရမည် ။ LCCI Level3အောင်မြင်ပြီးသူ , အသက် ၃၀ နှင့်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် ။ Female only
Heart & Soul Co.,Ltd(GPP)
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Junior Staff (Female)
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 200,000 - 400,000
Preparing bills receivable, invoices and bank deposits. Accounts receivable duties include ensuring accuracy and efficiency of operations, processing and monitoring incoming payments, and securing revenue by verifying and posting receipts.
Inventory Controller (RG Logistics)
Inventory controller maintains records of materials in inventory and on order. Monitors reorder points and initiates action to replenish stock. Reconciles discrepancies in inventories and notifies/ report to Chief Accountant of irregularities.
To Work in Finance Department
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 100,000 - 200,000
To Assist;work at Finance Department
Chief Accountant F ( 1 )
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 800,000 - 1,000,000
overseeing the accounting department, developing financial strategies, making investment decisions, helping company leadership with strategic planning, and making sure the company complies with state and federal financial regulations.
Accountant (WIN MYINT MO INDUSTRIES COMPANY) For Yangon & Shan State
Myanmar Shining Star Distribution Company တွင် Chief Accountant ရာထူးဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
Cashier (East-Dagon) RG Logistics
Accountable for error-free cash register operations, payment processing, and interactions with Labors, employee and etc.
Commercial Officer (Admin and Finance)
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား USD 500 - 750
The purpose of the role is to lead the staff function of the head office in Thanlyin, Yangon and ensure necessary support for the Program Head in the areas of Accounts, Administration and MIS Reporting.
Senior Auditor ( Mandalay ) ( M / F )
Senior auditors oversee auditing projects, ensuring that tasks are assigned to and completed by auditors in their team. They lead and assist in the auditing process and make sure that audits are done in accordance with company standards.
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 50
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း2မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း2ဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း4ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3ပညာရေးလုပ်ငန်း 1 စွမ်းအင်လုပ်ငန်း2ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း3ဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း3နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း3ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း 12 သတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း2အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း 1 လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 8 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 4
မန္တလေး7ရန်ကုန် 42 မြန်မာပြည်အတွင်း 1
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ 1 အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 49
Expats Preferred 11 Repats Preferred 6